Ohatrinona ny atiny vokarina an-tserasera ao anatin'ny 60 segondra? | Martech Zone
mety ho nahatsikaritra somary mitavozavoza ianao tamin'ny famoahana tato ho ato. Na dia lasa ampahany amin'ny ADN tato ho ato aza ny famoahana isan'andro, dia fanamby ihany koa aho amin'ny fampandrosoana ny tranokala ary manome endrika hafa bebe kokoa. Omaly, ohatra, dia nanohy tamina tetikasa iray hampidirana ireo tolo-kevitra momba ny whitepaper mifandraika amin'ilay tranonkala. Tetikasa izay notehiriziko efa herintaona lasa izay ary noho izany dia nandany ny fotoako nanoratra aho ary namadika azy io ho fotoana fanaovana kaody.
Manina ahy ve ianao tany? Azo inoana fa tsy… misy loharanon-karena marobe any mamoaka atiny mahavariana. Tsy ambanin-javatra diso aho fa misongadina ho tsara indrindra - Tiako tsotra fotsiny ny mizara ny zavatra hitako ary manampy amin'ny fanabeazana ireo izay nisoratra anarana sy manaraka ny bilaogiko mba hanohizako hanomezana anao fahitana ireo fitaovana sy fampahalalana an-tserasera hitako, fikarohana. , ary mianatra momba.
Raha ny voalaza, dia mampihetsi-po fotsiny ny habetsaky ny tabataba vokarina… ary tsy mihatsara izany. Ireo olona ao Moz dia nanao famakafakana atiny feno niaraka tamin'i BuzzSumo ary nahita:
Ny ankamaroan'ny lahatsoratra mifandraika amin'ny orinasa navoaka dia mahazo fizarana vitsivitsy ary rohy vitsy aza, ny ankamaroan'ny fifandraisana eo amin'ny 2 ao amin'ny Facebook.
Maherin'ny antsasaky ny rehetra bitsika mifandraika amin'ny orinasa nanana anjara 11 na vitsy. Azoko antoka fa ny sasany amin'izany dia noho ny fihetsiky ny mpampiasa Twitter, fa mbola manondro ezaka hatrany izany nefa tsy miverina ny orinasa.
Maherin'ny 75% ny toerana misy ny orinasa zero rohy ivelany ka raha ny hisambotra ny fikarohana biolojika no tanjona… ny ankamaroan'ny orinasa dia tsy mahomby amin'ny fahazoana mivezivezy ara-organika.
85% ny atiny voasoratra dia manana teny latsaky ny 1,000 na eo aza teny mihoatra ny 1,000 mandray tsy tapaka ny fizarana sy rohy.
Ny tranga ho an'ny atiny kely kokoa
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity dia nanangana tetikady an-tserasera izahay ho an'ny fanaraha-maso ny bibikely orinasa eto Indianapolis. Ny paikadin'izy ireo teo aloha dia ny habetsaky ny domains efa antitra miaraka amina pejy anatiny sy manan-katao an'arivony. Masinina afa-po izay nihazakazaka am-bolana maro hanandramana hamitahana ny algorithma… ary tsy mandeha izany. Nitsambikina tamin'ny toerany ilay tranonkala ary avy eo nianjera tamin'ny teboka iray izay mety hahitana azy ara-bakiteny ao amin'ny index.
Nandinika ny orinasam-paritra rehetra sy ny atiny mifandraika novokarin'izy ireo an-tserasera izahay hahazoana ny laharana ambony avy amin'ny mpanjifanay vaovao. Nahita am-polony votoaty taonina teo izahay - saingy vitsy ny pejy miavaka na feno tsipiriany. Raha tokony hanampy ny tabataba dia nanao fikarohana momba ny lohahevitra iray isaky ny mandeha izahay ary namokatra tranomboky atiny hanimba zavatra nosoratana tamina vazivazy izany, nahitana sary an-taonina maro, ary nanomboka namokatra infografika sy lisitra fizahana ho an'ity tranonkala ity izahay.
Ny valiny dia, ao anatin'ny volana maromaro, manjaka ny filaharana ilay tranonkala. Asa mafy tokoa izy io ary nandany fotoana sy lafo ny votoatiny… saingy ny vokany dia niasa. Kely kokoa afaka mamokatra ny atiny lehibe kokoa vokatra ara-barotra rehefa apetraka ny ezaka.
Rehefa mijery an'ity sary ity ianao ary mahita ny fironana amin'ny famoronana votoaty ao anatin'ny iray minitra amin'ny Internet tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, dia misy ny fotoana tsy mampino. Mamokatra atiny mahatalanjona sy ny anao ny atiny no ho mpanjaka eo amin'ny pawn.
Ny sary '60 segondra 'ataontsika dia mahita an'izay mitranga ao anatin'ny iray minitra fotsiny eo amin'ny Internet. Ny isan'ny fikarohana Google, ny hafatra Facebook ary ny hafatra WhatsApp nalefa tao anatin'ny 60 segondra monja dia tena mahatalanjona! Navoaka voalohany tamin'ny taon-dasa, nohavaozintsika izao ho an'ny 2017, mampiseho ny antontan'isa tao anatin'izay telo taona lasa izay. Robert Allen, Smart Insights.
Inona no mitranga amin'ny Internet ao anatin'ny iray minitra?
Tags: 20142015201660 segondraatiny noforoninafironana atinymailaka isan-taonamailakamailaka nalefa afaka iray minitraFacebooklahatsoratra facebookfikarohana google isa-minitraora atinySary torohayinstagram isa-minitraLinkedInhafatra nalefairay minitralahatsoratra navoakahaino aman-jery sosialyby MediaWikimailaka manontolo nalefabitsika isa-minitraTwitternakarinaWhatsAppvoatanisa ny tenylahatsoratra WordPressYouTube